एसइई विद्यार्थीको आन्दोलनमा राजनीतिक रंग : यो भएन है ढंग (विचार) -
शैलेन्द्र क्रान्ति ( पत्रकार )
प्रसंग हो प्रदेश २ मा एसइई अन्तर्गत अनिवार्य समाजिक विषयको पश्नपत्र परीक्षा पूर्व नै आउको कुरा । कहाँबाट आउट भयो ? कसरी आउट भयो ? किन आउट भयो, कसले आउट गर्यो यी तमाम पश्नहरु संघीय सरकार, प्रदेश २ सरकार एवं सुरक्षा निकायमाथि तेर्सिएको छ । यस्ता प्रश्नहरु सम्बन्धित निकायमाथि ठडिनु अस्भाविक होइन । एसइई परीक्षा जस्तो संवेदनशील प्रश्नपत्र परीक्षा पूर्व नै सार्वजनिक हुनु सरकार र सुरक्षा निकायको गम्भीर त्रुटि एवं लज्जाको विषय हो । प्रदेश २ मा एसइई अन्तर्गत बिहीबार हुने अनिवार्य विज्ञान र शुक्रबार हुने अनिवार्य समाजिक विषयको प्रश्नपत्र परीक्षा पूर्व आउट हुनुलाई एउटा ठुलो दुर्घटना नै भन्नुपर्छ । यसको परिणाम हो बिहीबारदेखि प्रदेश २ को आठवटै जिल्लाको विभिन्न स्थानमा एसइई परीक्षार्थीको उग्र आन्दोलन । हुनुपनि स्वभाविक हो ।
एकातर्फ निर्धारित समयमै परीक्षा हुन र सोहि दिन सो परीक्षा रद्द हुनु । अर्को दिन क्रमिक रुपमा फेरी परीक्षा दिन जाँदा विद्यार्थी रित्तै निराश फर्किनु । र फेरी परीक्षा रद्द भएर अन्य विषयका परीक्षा पनि केहि दिनको लागि स्थगित हुनु । यसले एसइई दिने प्रदेश २ का हजारौ परीक्षार्थीको भविष्य अन्योलमय बनेको छ । उनीहरु मानसिक तनाबमा छन् भन्ने कुरा सहजै बुझ्न सकिन्छ । यस्तो अबान्छित गतिविध गतिविधिले एसइई दिने परीक्षार्थी, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, सुरक्षा निकाय, शिक्षक, अविभावक लगायत तनाबमा छन् । यसको मुख्य जिम्मेबार को भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । अर्को तर्फ यसलाई राजनीति रंग दिन थालिएको छ अर्था राजनीतिककरण गरेको छ । जसले मानसिक तनाबमा परेका एसइईका विद्यार्थी गलत प्रयोगका सिकार हुन शुरु भएको छ ।
केहि राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनका नेताहरुले उस्काएर कोहि संघीय सरकारको विरोधमा उतारेका छन् । त कतै प्रदेश सरकारको विरोधमा उतारेर सार्वजनिक सम्पति, सवारीसाधन र प्रहरीमाथि ढुंगामुढा, तोडफोड गराउँदै उच्सृंखल गतिविधि गराएर आफ्नो राजनीतिक पब्लिसिटी लिन खोजेको सहजै देखिन्छ । जे दुर्घटना हुनुपर्ने थियो । भयो । अव यसको मुख्य दोषी को ? प्रश्न पत्र कसले आउट गर्यो ? कुन निकाय कति यसको जिम्मेबार र दोषी हो । त्यो पत्ता लगाउने बेला हो । त्यसको लागि शान्तिपूर्ण बातावरणमा दबाब दिनुपर्दछ । प्रहरी प्रशासनलाई दोषी खोज्न सघाउनु पर्दछ । तर तोडफोड, ढुंगामुढा, चक्काजाम यसको निकाश होइन ।
अभिभावकहरुले हामी आफ्नो विद्यार्थी एवं परीक्षार्थीलाई राजनीतिक स्वार्थको रोटी सेक्ने एवं गलत बहकाउमा लगाएर विगार्नेहरुसंग सतर्क गराउनु पर्ने बेला छ । र सतर्क हुनुपर्छ । आफ्नो उज्वल भविषयको लागि गर्नु पर्ने मिहिनेतको खाँचो छ । गलत बहकाउमा परेर एसइईका विद्यार्थीले तक्मा पाउने होइन । भोली हुने एसइईको तयारी गरे ग्रेड अझै राम्रो होलामा दुईमत छैन ।
राजनीति गर्नेहरु अरुलाई प्रयोग गरेर सत्ता चढ्ने, पब्लिसिटी कमाउने दाउमा हुन्छन् । तर विद्यार्थी भाइबहिनीले आफ्नो भविष्य खोज्नुपर्दछ । र भविष्यको लागि पठनपाठन र शिक्षामा ध्यान दिनुको अर्को विकल्प छैन । बरु सिस्टम सुधार्न हामीले आबज उठाउनु पर्दछ । त्यो पनि सभ्य तरिकाले ।
हरेक कुरालाई राजनीतिक रंग दिनेहरुसंग सतर्क रहनु अपरिहार्य छ । र दोषीलाई पत्ता लगाई कार्वाही गराउन शान्तिपूर्ण बातावरणमा आफ्नो तर्फबाट हुने दबाबा सृजना गर्नुपर्दछ । हो प्रदेश २ बदनाम भएकै हो । गराएकै हो । यसमा दुईमत छैन । आज हामी सचेत भएनौ भने यो भन्दा ठुलो बदनामीका कलंकहरु हामीलाई बेहोर्नु पर्दैन भन्न सकिन्न । यसबाट हामी सचेत नागरिक बँच्नुपर्छ, प्रदेश सरकार सचेत एवं ईमान्दार हुनुपर्छ र संघीय सरकारको नियतत ठीक हुनुपर्दछ । यसैमा हामी सबैको भलाई छ ।
जनकपुरमा छाडाचौपायाले सर्वसाधारणलाई सास्ती, उपमहानगरपालिका मौन
दीपक कर्ण- जनकपुरधाम,फागुन ७ गते । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले बजार क्षेत्रमा जथाभावी छाडा छोडिएका घरपालुवा जनावरलाई नियन्त्रण गर्न नसकेपछि सर्वसाधारणहरु सास्ती भोग्न बाध्य भएका छन् । सडकमा जताततै छाडा चौपायाको कारणले दुर्घटनाको सम्भावना पनि उत्तिकै बढेर गएको छ । जनकपुरमा सडक विस्तार भएसंगै सवारी सधान अत्याधिक बेगमा चलाउनेहरुको अहिले प्रतिस्पर्धा रहेको छ । अर्को तर्फ दिनप्रतिदिन […]
महोत्तरीमा प्रहरीमाथि दुव्र्यवहार गर्ने एकजना पक्राउ
Posted on July 27, 2018 July 27, 2018 Author शैलेन्द्र क्रान्ति
जनकपुरधाम, साउन ११ गते । महोत्तरीको भंगहामा प्रहरी जवानमाथि दुव्र्यवहार गर्ने एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा बर्दिवास नगरपालिका–१२ विजलपुराका तर्क बहादुर आले रहेका छन् । बिहीवार दिउँसो भंगहा नगरपालिकाको जमुनियाँमा खुल्ला मदिरा बिक्री वितरण निषेधित क्षेत्रको निरीक्षण गर्न पुगेका भंगहा नगरपालिकाका मेयर संजिव साहसँगै टोलीमा रहेका प्रहरी जवान मंजुर गद्दीलाई आलेले दुव्र्यवहार […]
मधेसको विकासका लागि अघि बढेका छौं : प्रम ओली
Posted on February 2, 2019 February 2, 2019 Author शैलेन्द्र क्रान्ति
सिरह,माघ १९ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तराई मधेसको विकासका लागि सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा काम अघि बढाएको बताएका छन् । शहीद हेमनारायण यादवको १५ औं स्मृतिसभालाई आज सिराहामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले मधेशका बारेमा विभिन्न हल्ला चलाइएपनि सरकारका कामले ती सबै कुराको जवाफ दिने बताएका छन् । […]
अवस्था तनावग्रस्त, राज्यमन्त्रीको गाडीमा तोडफोड
महोत्तरीमा अटो रिक्सा पुलबाट तल खस्यो , दुधेबालक सहित ६ जना घाइते